Panguin: Eeg Saamaynta Isbedelada Google Algorithm | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 22, 2012 Arbacada, Nofeembar 21, 2012 Douglas Karr
Mararka qaarkood qalabka fudud ayaa ugu qiimaha badan. Waqti ka waqti, macaamiisheennu waxay la yaaban yihiin haddii ay saameyn ku yeesheen ama ay saameyn ku yeesheen isbeddellada algorithm ee Google sii wado soo saarista. Uma daneyno inaan ka walwalsano iyaga sidii aan horey u ahaan jirnay - daacadnimo dhan algorithms waa la hagaajiyay si fiican waxaan diirada u saareynaa qorida waxyaabo kafiican iyo hubinta inay fududahay in lawadaago.
Hadaad jeceshahay inaad runtii kudhawdo tabsada algorithm, miyay fiicnaan laheyd inaad kudhaafiso cusbooneysiinta algorithm dhabta ah taraafikadaada raadinta dabiiciga si aad u aragto inay wax saameyn ah jirto? Taasi waa waxa Barracuda ay ku siineyso qalabkeeda la yiraahdo Panguin. Soo gal qalabka, dooro Analytics xisaabta aad jeceshahay inaad falanqeyso, aaladuna waxay ku dul marineysaa taraafikadaada raadinta dabiiciga ah taariikhaha Google Panda, Penguin iyo wixii isbeddel ah ee algorithm kale.
Sidaad u aragto, waxaan ku quusinay sii deynta Penguin Exact Match. Waxaan la dagaallameynay degmooyin kale oo xadayay waxyaabahayaga iyo sidoo kale hubinta in goobaheena ay si sax ah u wareegaan. Waxaan dooneynaa inaan hubinno inaanan laheyn wax cinwaano ah halkaas oo ay ku jiraan qaddar badan oo nuqullo nuqul ah oo naga yimaada.
Erin iyo kooxdiisii ​​SEO xirfadlayaal at Istaraatiijiyadda Goobta ayaa ii rogay qalabkan intii aan ku jirnay bandhigeena toddobaadlaha ah, Edge-ka Webka Raadiyaha - waxaan nahay kafaala-qaadaha bandhigga.
Tags: geyntaalgorithm googleisbedelka algorithm googlePanda googlegoogle penguinPANDApenguin
Waxqabadka iyo Kormeerka Warbaahinta Bulshada